Kedu ihe m nwere ike iji kama ụfụfụ ụfụfụ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Diy foam foam - Find the solutions
Diy foam foam - Find the solutions
Kedu ihe m nwere ike iji kama ụfụfụ ụfụfụ?
Anyị Top 6Amfụfụ RollerNdị nnọchi
Bọọlụ Tenis. Kacha nkịtịụfụfụ alaọzọ bụ bọọlụ tenis.
Bọọlụ Lacrosse. Nwa dị nro karịa bọọlụ tenis, bọọlụ lacrosse bụ nnukwu ihe ọzọ na aụfụfụ alanakwa.
A ịkwanyere Pipe.
Softball ma ọ bụ Baseball.
Bob na Brad ọkachamara physiotherapists abụọ a ma ama ♪♪ na ịntanetị ♪ - Ndewo ndị bekee, Abụ m Bob Schrupp physiotherapist - Brad Heineck, physiotherapist - Anyị bụkwa ndị ọkachamara n'ihe ọmụmụ physiotherap na ịntanetị - N'echiche anyị, n'ezie, Bob - Taa, Brad, ka anyị kwuo maka ụfụfụ na-agbagharị n’azụ gị. Emela nke a, mee nke a kama. Cheta, nke ahụ ga - adị ka mama gị ịgwa gị okwu - Bradley ma ọ bụ achịcha, eh? Onwere onye kpọrọ gi? 'Emela ihe ahụ.' - Achịcha, ee, akpọla m achịcha.
Na-aga n'ihu. - Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na ọwa anyị naanị were nke abụọ ka ịdenye aha anyị, anyị na-enye isiokwu gbasara otu ị ga-esi nwee ahụike, ahụike na mgbu na anyị na-ebugo ha kwa ụbọchị. Gụnyere, eee, Nna anyị ukwu, ee, ị ga - achọ isonyere anyị na ntanetị mgbasa ozi anyị na ebe nrụọrụ weebụ anyị bobandbrad.
N'ihi na anyị na-enye onyinye mgbe niile. Gaa na mpaghara inye ego, anyị ga-ekpughe ihe anyị na-enye. Mba, anyị ga-agwa gị ugbu a ihe anyị na-enye Brad? - Bob, ị mere m obi ụtọ, SleepOvation dị asatọ. - You're naghị ekwu ya n’ezie. - Aw Bob, gịnị kpatara Bob. (Angel Music) - SleeOvation matrasị - Gini kpatara, gini - 700 mattresses obere, nke a bụ naanị ihe atụ nke ha, ọ dị mma maka nhụjuanya mgbu, ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbu mgbe ị na-ehi ụra tufuo di ma ọ bụ nwunye gị ma mee onwe gị akwa akwa ọhụrụ nwere onwe gị Onye ọlụlụ, chei bob! - Ọ dị mma, ka anyị pụọ, taa anyị ga-ekwu maka ya, anyị ga-egosi ụfụfụ ụfụfụ ị chọrọ ịnwale mgbe ị nwere ihe mgbu na ndị ị na-achọghị, ihe mbụ ị na-achọghị 'Achọghị ime, ka anyị bido, ị chọghị ịgbanye ụfụfụ n'akụkụ ala gị.
Ihe kpatara ya bụ, Brad ị nwere ike ijide nke a? - Ee - Ya mere, mgbe m guzoro, were spain ebe a, nke a bụ azụ azụ, ị tinye ya otu ahụ, ee, ọ dị ka nke a, ị rapaara n'ezie, ị hụrụ, enwere ọtụtụ obere nkwonkwo, ị na-ejikọ ha ọnụ. Ma nke ahụ agaghị adị. Obi dị gị mma, ọ gaghị adị mma maka azụ gị - ọ bụ obere ihe ike.
N'ezie, ọ bụrụ na ị gaa n'etiti azụ, ị nwekwara oghere ọgịrịga nke na-akwado ọkpụkpụ azụ, nke na - eme nnukwu ọdịiche - yana agịga ahụ, ọ bụrụ na anyị abanye n'etiti azụ, ihe anyị na - aga kwuo, ị nwere ike ịga n'ihu ma mee, anyị achọghị azụ azụ, ị nwere ike ime azụ azụ n'ihi na ọtụtụ mmadụ amalitela ịgbakọta ebe a - ee - yabụ ka anyị gbalịa ịgbatị nke ahụ, laghachite n'ọnọdụ. Yabụ kedu na anyị agaghị ebido Brad mbụ a. Ka etiti-azụ mee otu.
You're gaje ije n’akuku a, aga m eje ije a - N’ezie. - Aga m amalite site n'akụkụ a. Akwa, ikekwe otu n'ime ụfụfụ na-agba ụfụfụ kachasị mma, ihe ị nwere ike ime bụ etiti-azụ.
Naanị tinye ya na ebe m mere ya n'ụtụtụ a, m ga-eme ya ọzọ n'otu ntabi anya. - Oh, nke ahụ dị mma. - I huru m tinye isi m Ma ana m eji ukwu megharia azu.
Dị mfe ime. Brad, ị gaa n'ihu n'ihu n'olu, echere m karịa m. - Ọ na-adị mma, Bob, achọrọ m ịga, gịnị ma ọ bụrụ na igwe okwu m dị? n'ụzọ, aga m aga n'ihu n'ihu, mana ị maara.
Chineke m, m weliri anya lee Sam anya Kpoo m okpu a ma menye m ụjọ. Ọkpụkpụ a. Ka o sina dị, mana mgbe ụfọdụ --- ọ na-ele ya anya.
Ọ dị mma, Brad na-esote, ka anyị na-agagharị azụ a, m mere Brad ahụ, azụtara m azụ n'izu ole na ole gara aga, ọ dịkwa mma, echere m, 'know maara, ọ dị anyị mkpa igosi nke ahụ.' Ya mere, echere m na m kụrụ quadratus lumborum, ihe ị na-eme bụ na ị gaghị aga ogologo na spain, ị na-aga n'akụkụ. Yabụ ị gbalịrị nke a ma ọ bụ na ọ bụghị? - Ọfọn, n'ezie, n'ihi na m na-na na a bit ọzọ mwute na m n'etiti azụ, n'ihi na m spinal osteitis.
Ma ọ bụrụ na m na-achịkwa ibu m site na ogwe aka m ebe a na ụkwụ m ebe a.- Ee, ị hụrụ, ya mere, ka anyị pụọ na pelvis, anyị emela, ka m gosi gị ebe a. - Ee, gosi spain.- Ya mere, m ' m dị ka nke ahụ, lee, anọghị m na pelvis n'onwe ya, esi m pelvis pụta, amalitere m ebe a na mpaghara a, enwere m ike ịnweta quadratus lumborum, nri? kwuo? - Ee, nke na - abụ nnukwu akwara na - ejide akara gị. - Ma lee ihe Brad na-eme, ọ dị ntakịrị, ọ bụghị ya n'akụkụ, ị bụ akụkụ nke ụzọ atọ, ọ bụghị, ị gaghị ekwu Brad? - Yep, m ga - enye pelvis otu akụkụ nke ogo 45, ogo 50, ogo 51 - ogo 45 n'ụzọ ahụ ma ị tụgharịa, m tụgharịrị, amaghị m etu ị si eme Brad, na-apụ Basin, nke ahụ na-eche n'ezie ezi. - you ma ihe ị ga - eme n’ụlọ bụ ime ihe masịrị gị, ị ga - ama n’ihi na ugbu a, enwere m ike ịnụ ya ma m wee nwee ahụ ike a, otu n’ime ihe mgbu ndị ahụ na - ewute nke ukwuu - Kpọmkwem na ọ bụ.
Okwesiri ibu, okwesighi meru aru, o gha emeru aru nke oma - Ee, odi ka aw, nke a na-adiri gi nma ma i mee ya - Brad na-esote Brad, mee ya ugbu a Anyi na-aga n'ihu, nke a dị ntakịrị , ọbụghị nke ahụ kwụ ọtọ, mana mgbatị hip gị na-arịgo ma tinye aka na pelvis gị, ma mgbe ha siri ike, nke ha na-abụkarị, na ọtụtụ ndị na-anọdụ ala nke ukwuu, ha na-adọta pelvis ahụ ka ha wee metụta ya azu. Ya mere ọ ga-eme nke ahụ. Nke a bụ pelvis, hip flexor, obere hip flexor ga-adọpụ ya otu a, ọ ga-etinye nrụgide na azụ ebe ahụ.
Ya mere nke a ọ nwere ezi uche nye gị, Brad? O yiri ka ọ gbara mgbagwoju anya. - Nke ahụ dị mma Bob, ka anyị gosipụta mgbatị ahụ. Anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa. (ọchị) - Enwere ihe ọ na-ekwenyeghi ebe a. - Site n'ụzọ, nke ahụ dị ezigbo mma, Achọrọ m ijide n'aka na m nwere akụkụ nke ọzọ.
Ọ dị mma, ugbu a ka anyị rute ya. - Ọ dị mma, mgbatị hip, ị na-eme nke ahụ n'otu n'otu ka m na-eme, ma ọ bụghị na ị nweta ngwugwu ma ị chọghị inweta ngwugwu ahụ, Brad? - (chuckles) Enwere m obi ụtọ na m nwetara otu, ọ dị mma, ka anyị pụọ - Ya mere, m ga-agagharị n'akụkụ m ntakịrị ebe a ọzọ, nke ahụ dịkwa mma maka mgbu hip. Echere m na, nke a nwere ike ịgbakwunye ihe mgbu hip mgbe mgbapụta hip siri ike.
Agaghị m eme akụkụ a maka Brad n'ihi na enwere m igwe okwu n'akụkụ a - Ee, nke ahụ ga-emebi ọnụ ọgụgụ gị, nwute. Achọrọ m n'ezie ịgafe ma nweta ihe mgbochi hip. Know mara, ị nwere ike ịdị iche na obere. - Ya mere hips, dị ka m kwuru, hip flexor nwere ike imetụta pelvis na azụ, yana hamstrings.- Oh nri.- Ya mere ị chọrọ ime hamstrings kwa? Ya mere, ka anyị gaa n’ihu, nke a bụ nke ikpeazụ anyị ga-eme n’elu ala, anyị bụ ndị aga m aga n’ihu, ma unu abụọ nwere ike ịgbanye na mbido, nke ahụ na-abụkarị ihe m na-eme.
Ma mgbe ahụ m ga-agbadata otu, ị nwekwara ike ịgafe ụkwụ gị na nke ahụ na-akụda n'ụzọ ahụ gaa pelvis na-agbagharị ya ruo elu. - Na mpaghara buttocks. - know mara otu ihe, Agaghị m ekpughe na ugbu a, Brad, enwere m agbatị ọzọ, ụfọdụ gbatịpụrụ agbatị iji mee hamstring - oh ị na-eme? - ọ ga - agụnye - ị ga - ejide anyị, ọ bụ? - Agaghị m arapara ya, ọ ga - abụ akụkọ ọdịnihu, yabụ ị ga - edebanye aha anyị. - Oh, ee.- Ọ dị mma, Brad gara aga na - anwa ịme ka ihe na - aga ebe a. dị nnọọ anụrị nke a.- Brad nwere ike ọ gaghị eme nke a n'ihi na ị.
Enwere m Spinal Osteitis, maọbụ na ị kwuru ya.- Kwuo ya n'ụzọ gị.- Spinal Osteitis.- Spinal Osteitis.- Spinal Osteitis.- Anyị ga-enwe ike ịsụ bekee.
Mgbe ị nọ n’okpuru azụ n’etinyeghị ya nnukwu nsogbu. Nwere ike nweta ya gburugburu pelvis ebe a wee nọdụ ala otu a, obere nrụgide dị mma na azụ gị, ọ dị nro, mana ị gbatịrị ya ruo nke mgbatị, ọ dị mma ịme. - Ọ bụrụ na ị nwere ọkpụkpụ azụ ọkpụkpụ ma ọ bụ stenosis na ị na-eme nke a na ọ na-ewute ya na ị nwere ike ọ gaghị ama na ị nwere ya ma ọ bụrụ na ị na-eme nke a ma ọ na-ewute naanị emela ya, kwuo nke a - Ee, ọ bụrụ na ị gafere 55, dị oke egwu, ma ọ bụrụ na ị mee nke ahụ ma ọ na-afụ ụfụ, ọ ga-abụ na ị nwere stenosis spinal ma ọ bụ spinalostitis - ọ dị mma, ọ bụrụ na ị na-ebelata ọ nwere ike itinye aka na stenosis ahụ, nke mere na ndị karịrị 55 na-amalite ịda mbà.- Ee, intervertebral diski na-efunahụ ịdị elu ha na mmiri na ihe niile. - Usoro ịka nká bụ ihe mara mma.- Ọfọn, dị ka Brad na m na-ekwukarị mgbe ọ bụla na-acha ma na-acha ntụ n'èzí Enwere ntutu, enwere wrinkles n'ime na isi awọ, na otu ụzọ, ihe akaghị.
Yabụ na ọ bụ akụkụ nke ndụ, n'oge ụfọdụ anyị ga-atụgharị n'ájá - trying na-anwa imebi ndị na-ekiri anyị? - Ee e, mba, ma, okirikiri ndu, imara na mmadu ga-ericha anyi ma emesia ga-adi ndu - N’ezie, Bob. - Odi mma, daalụ. (aru electronic electronic)
Enwere ike iji akwa yoga mee ka ụfụfụ ụfụfụ?
Obi dị m ụtọ na e nwere ụzọ ka mma ma dị ọnụ ala karịa iji nweta nke gịtụgharịana Enyi m Jason Polonsky mere n'oge na-adịbeghị anya aụfụfụ alasite na ọkpọkọ PVC, aihe nkpuchi yogana ụfọdụ duct teepu. Jason bụ onye na-asọ asọmpi asọmpi ma ọ bụrụ na ọ na-eme ya n'ụlọụfụfụ alana-arụ ọrụ maka yagan'ezie rụọ ọrụ maka anyị niile.Ọkt 15, 2012
ọzụzụ nwere ike
Enwere m ike iji bọọlụ tenis dị ka igwe ịgba ụfụfụ?
Gbanyụọ ụlọ ikpe ahụ, ndị oberebọọlụ nwere ikebelata ọtụtụ mgbu na ihe mgbu na-adịghị ala ala. Ha na-eme ihe dị ka obereụfụfụ alaga-, na-eje ozi dị ka a onwe-ịhịa aka n'ahụ ngwá ọrụ ịnwere ike ijina akwara, ma ọ dị oke ọnụ.Ọnwa Ise 26, 2019
Taa, m ga-ekwu maka nrụpụta nrụgide nrụpụta ma ọ bụ ihe ndapụta nwere na bọlbụ nrụgide. Ndi Eze Athletic zitere m bọọlụ ndị a na ịmụtakwu banyere ha, gaa na KingAthletic.com.
Enwere m mmasị na bọọlụ nrụgide ndị a n'ihi na ha bụ bọọlụ lacrosse. You nwere ike iji bọl tennis, bọọlụ golf, ma ọ bụ bọọlụ racquet, mana njupụta ha dị iche iche anaghị adị mma mgbe ụfọdụ maka ịhapụ nrụgide. Bọọlụ tenis dị ntakịrị apịtị, bọọlụ golf siri ike n'ezie, bọọlụ racquet dịkwa ụdị ịpịkọta.
Nke a bụ ebe dị n'etiti ebe ọ na-enye ntakịrị ntakịrị ka ọ bụrụ na ọ naghị esiri ya ike, mana ọ dị mma ma sie ike ebe ị nwere ike nweta ihe ahụ na-ebute ma ọ bụ nrụgide ahụ. Ha bịara na agba dị mma oroma. Ha dịkwa na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ! Nke a bụ agba m kacha amasị m.
Ha na-abịa na a mma Tote akpa ya mere ha dabara na gị n'akpa uwe mgbe ị na-eme njem na ị nwere ike mfe iburu ha. Otu n'ime ihe ndị dị mma ịmalite bụ ihe nrụgide n'ọbọ ụkwụ gị ebe osisi gị dị. Ya mere ị nwere ike ịmalite site na ịchọta isi okwu ahụ na ịpị ụkwụ gị na ya, ma ọ bụ ịnwere ike ịgbanye bọọlụ na ụkwụ gị wee nweta mpaghara fascia niile mara mma.
Mgbe mbụ ị bidoro, ịchọghị ịgbalị ike n’ihi na ị ga na-enwekarị ya. Mana mgbe ịmalite, ị nwere ike ịmalite ịmalite ntakịrị ike. ma tinye obere nrụgide iji belata ihe ndị ahụ na-adịghị mma na nrụgide ebe ahụ.
Ugbu a, m ga-egosi gị otu ị ga-esi dinara ala. Ebe ọzọ dị mma iji bọọlụ na-enye nsogbu dị n'okpuru gị, ebe ebe ị na-egwu na piriformis dị. Yabụ ị nwere ike ịdabere na ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ obere nrụgide ịmalite wee nwee ike ịtụgharị ma nọdụ na ya, mana gbalịa ime ka ahụ ahụ dị jụụ.
Ihe mere ihe ndị a ji amasị m nke ukwuu bụ na ị nwere ike iji aka gị mee nrụgide, jiri mkpịsị aka gị banye, mana aka ga-agwụ. Yabụ nke a bụ ụzọ dị mma iji kpuchido ahụ gị ma hapụ isi nrụgide. Yabụ na ọ mara mma na ebe ahụ.
Can nwere ike ijide ya ihe dị ka sekọnd 5-10 na mbido, ma ọ bụrụ na ọ na-adị ezigbo mma ị nwere ike ịrụ ọrụ gị ruo ihe dị ka sekọnd 30. Ebe ọzọ dị mma bụ nkwonkwo SI. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere nnukwu nsogbu, nnukwu nrụgide dị na nkwonkwo SI a.
Ọ bụrụ n ’oge ụfọdụ a naghị ahazi ya nke ọma, ịnwere ike iji nke a mezie ya. Debe bọọlụ n'okpuru obere dimkpa ndị ahụ n'azụ gị ma jiri nwayọ dinara ala na ya. Ọzọ, ị nwere ike ehulata ntakịrị ma ọ bụrụ na ị chọghị a otutu nsogbu na-amalite, ma mgbe ọ na-eche ihe ọma i nwere ike n'ụzọ ụfọdụ ehulata na-eji gị ahu ibu na-etinye a nta ọzọ nsogbu, nke na-eme ọ dị mma nke ukwuu .
Cheta, na ichoghi ihe mgbu, ihe mgbu, ichoro ka odi ka o na-eme nke oma, iji mee ka obi di ya nma, obu ezie na odi obere iwe. Ọ bụrụ naanị na-afụ ụfụ, ọ na-ewute gị ekwesịghị iji ya. Ma mgbe ahụ ị nwekwara ike ịga akwara levator scapula gị, nke na-adọta scapula gị elu.
Nke a bụ otu nke na-enweta nke ọma, na-agbasosi ike ma dị nro mgbe ị nwere nrụgide ma debe ubu gị mgbe ị na-arụ ọtụtụ ọrụ kọmputa na ogwe aka gị dị ka nke ahụ. Ma nke ahụ ziri ezi n’ebe ahụ n’ubu ubu ahụ. Ọzọ, ị nwere ike were bọọlụ wee dinara ala na ebe a.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ka ahụ gị mee ya ntakịrị, ị ga-ama mgbe ị ga-akụ ya n’ihi na ọ dị iche karịa mgbe ị na-edina ala n’arụghị arụ. Yabụ ndị ahụ bụ ihe mmeghe gị na-atọhapụ gị na bọọlụ ịhịa aka. Iji mụtakwuo banyere Eze Athletic Bọọlụ m na-eji, gaa KingAthletic.com.
Ọ bụrụ n’inwere mmasị ịzụrụ ihe ndị a ị nwere ike ịga na webusaiti m na ụlọ ahịa anyị na AskDoctorJo.com/products. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko hapụ ha na ngalaba nkọwa.
Echefula iso m na Facebook na Twitter. Chetakwa, dị njikere, nwee anụrị ma enwere m olile anya na ị ga-akawanye ngwa ngwa.
Enwere m ike iji ntụtụ na-agagharị kama ịkpụ ụfụfụ?
AML R AKW .KWỌ: Ọ kachasị mma iji kpuchie mpaghara ndị buru ibu dịka quads, hamstrings na IT band. Nke a na-arụ ọrụ n'ụzọ yiri nke ahụụfụfụ ala, makamankeejiahụ gị arọ ị na-itinye nsogbu na ogwe aka gị. ARolling pin nwere ikebụru onye doberu ẹka ndoo.Ọnwa iri 21, 2011
Gini mere ụfụfụ ji na-ajọ njọ?
Ọ bụrụ na ị tinye nrụgide na-adịgide adịgide n'otu akụkụ ahụ, ị ​​nwere ike ịdaba akwara ma ọ bụ mebie anụ ahụ, nke nwere ike ibute ọnya, dị ka Monica Vazquez si kwuo, onye nkuzi NASM gbaziri agbazi na USA Track and Field Running Coach. Ndozi: “Tinye sekọnd 20 na ntụpọ ọmịiko ọ bụla wee gafere,” ka Vazquez tụrụ aro.Ọnwa Ise 1, 2014
Gịnị bụ mma karịa a ụfụfụ ala?
'Dị kaụfụfụ rollers,ịhịa aka n'ahụegbe nwere ike ịkpalite mgbanwe nhụjuanya n'imeakwara. Ha nwere ike ime ka ọbara gbasaa na mpaghara ahụ, nke na-akwado mgbake ma nwee ike belata mbufụt, 'ka ọ na-ekwu.Jun 15, 2020
Nwere ike ịgbanye ụfụfụ na-emerụ ahụ?
Bụfoamfụfụ Rollingnchebe?Amfụfụ Rollinga na-ewere n'ozuzu dị mma kameema ọ bụrụ na ị na-enweta muscle tightness ma ọ bụ mgbe nile na-emega ahụ. Ma zerefoamfụfụ Rollingma ọ bụrụ na ị nwere mmerụ ahụ dị egwu dị ka akwara akwara ma ọ bụ nkwụsị, ọ gwụla ma dọkịta gị ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa anụ ahụ ekpochapụla gị mbụ.
Ekwesịrị m ịfụfụ ma ọ bụ mee yoga mbụ?
Jiri aụfụfụ alaotu akwaradịwarmed, karịa na mmalite nke gịomume yoga. ZereRollingn'elu ọkpụkpụ ma ọ bụ nkwonkwo. Tinye afoamfụfụ Rollinggbatịa dị ka nkwadebe maka njide miri emi ma ọ bụ ịgbatị miri emi.Ọnwa Ise 30, 2019
Kwesịrị ịfụfụ tụgharịa kwa ụbọchị?
Marakwa: ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ gịfoamfụfụ Rolling,gịpụrụ ịbụ ihe na-egbu mgbu — ọbụna ihe na-egbu mgbu - mgbegịmbụ bido. Jide ya ruo izu ole na ole na ihe mgbu ga-adị mfe. Iji mee ka mgbanwe, enweghị nchekasị, ma zere mmerụ ahụ,ị kwesịrịịhụ nampịakọta foamiri akwa ụbọchịndabere maka 5 ruo 20 nkeji.Ọnwa Itolu 27, 2013
tour de france ndị na-agba ịnyịnya America
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na enweghị m ntụpọ agagharị?
Banye n'ime ụlọ mmanya gị ma wepụ otu karama mmanya. Kechie karama ahụ n'ime ihe mkpuchi iji mee ka ọ dị ọcha. Ntụ ọka ahụ gbanye ntụtụgharịawepụ mgwakota agwa gị.Eprel 30, 2017
Kedụ ka m ga-esi tụgharịa mọzụlụ m n’akpaghị ụfụfụ?
Bọọlụ tenis bụ nke kachasịkarịụfụfụ alaọzọ, Sin na-ekwu. Ọ bụ ngwá ọrụ kachasị mma maka ebe dị nro dị kanke giala azụ, vesosmọzụlụdị kanke giụmụ ehi, nke nwere ike iguzogide njupụta nke ngwá ọrụ ịhịa aka onwe onye siri ike karị.Ọnwa Ise 5, 2021
Ego ole ka ọ na-eri iji mee ụfụfụ ụfụfụ?
Maka ọnụahịa nke ịme otu ụfụfụ, ị nwere ike nweta ogologo PVC ogologo oge ma belata ya n'ọtụtụ ngalaba, jiri akwa yoga kpuchie ha niile ma mee 3-4 ụfụfụ ụfụfụ dị ka onyinye, ha niile bụ ihe na-erughị $ 20. Ghichaa ihe eji eme yoga ma ọ bụ ihe mkpuchi ọzọ n’elu ala ma debe ọkpọkọ ahụ n’otu njedebe.
Gịnị bụ ụzọ kasị mma isi jiri ụfụfụ ala?
Ekwadoro m naanị iji bọọlụ golf maka ala ụkwụ gị mgbe ị kwụ. Nwere ike itinye bọl ahụ n'ụkwụ ụkwụ gị ma tinye ọtụtụ pịa ịchọrọ, jiri nwayọ na-agbagharị bọọlụ ahụ na-aga n'ihu. Osisi na-ewe obere oghere ma dị ukwuu maka njem. Ogwe Yoga na-enye gị ohere itinye nrụgide ọzọ na mpaghara ndị nwere ike ịchọrọ ya.
Kedu otu esi esi na-eme ụfụfụ ụfụfụ maka akwa yoga?
Ntuziaka na-eme mkpọtụ ụfụfụ: Bee ogologo 24-inch nke 4 inch PVC pipe. Ghichaa ihe eji eme yoga ma ọ bụ ihe mkpuchi ọzọ n’elu ala ma debe ọkpọkọ ahụ n’otu njedebe. Jiri mma dị nkọ ma ọ bụ mma eji arụ ọrụ iji bepụ ute na ebe a. Kechie mpempe yoga ịkpụ aka na PVC na teepu tinyere eriri a na teepu. Ekele!